becindezelwa ngokwengqondo - nethonya ezilethwa oyedwa kwabanye abantu ukushintsha imicabango yabantu, izinqumo, imicabango yabantu, noma izilungiselelo zabo siqu. It wenziwa akulona othembeke kunabo bonke futhi ekungilo umbono lwesintu, izindlela. Kodwa, ngeshwa, kungaba zishayisane ngamunye.
becindezelwa ngokwengqondo lungeza ngezindlela eziningi ezihlukahlukene. Ukuphoqa ungomunye walabo. Lena - umzamo okwakusobala kakhulu futhi engakaze ibonwe ukuthonya omunye umuntu. Le ndlela Okokuthola ukusetshenziswa ngokungemthetho obungokwengqondo.
On the ingxenye yohlelo yayo kubonakala sengathi ukwaziswa imithelela komuntu. Yikuphi kungase kuhambisane ngokusongelwa ngobudlova. Kodwa yilezi Ezimweni ezimbi kakhulu.
Ngokuvamile le zokuziphatha umhlukumezi usebenza kwezinye "ikhadi trump." Lokhu kungaba amandla, imali, isimo idatha yakhe esilingweni abanethonya futhi wakuthola. Abanye bazama ukubulala yimpango yabo. Isho lamagama ukuthi usabonakala besithunzi sobuntu oluyimpuphu kanye lokunyathela odakeni ka bakhe ukuzethemba. Lo muzwa esizalwa nawo kungaba kokubili izinto.
Abanye balandela amacebo ka kukhathazeka. Kuyinto ngamabomu zokuziphatha ukuhlushwa indoda ngezindlela ezahlukene.
Lolu hlobo kontanga nzima kakhulu ukumelana nayo. Kodwa kungenzeka (nge ngenxa oyifunayo). Okubaluleke kakhulu - abonisa ngokunembile imigomo ngokwabo ukuthi uzama ukuba aphishekele iznevolschik. Sidinga ukuqonda ukuthi yini afuna. Bese senza okuphambene. Vele musa umazise ukuthi ukuphikiswa ngamabomu. Kumelwe uyavumelana nesiqinisekiso umuntu uzama ukwenza "isisulu" njengoba imfanelo uhlamvu. Ekugcineni, kuhlulekile isephulamthetho zokuziphatha ukushiya umuntu ahlale yedwa. Njengoba eqaphela ukuthi isisulu sakhe ehlosiwe akuyona izuzwe.
Yilokho kuphela uma ngokweqile naye, kufanele ube nesineke futhi siqine. Ngenxa iznevolschik nje ngeke ngikushiye wedwa. Ngaphambi kwalokho, pereprobuet izindlela ezehlukene. Uma isimo inikeza ukungakhululeki kakhulu, kungcono ukuba ubalekele ke. Ngo ngomqondo truest izwi - uyeke bonke oxhumana nabo. Kodwa ngenxa yoshushiso, okungenzeka ukuqala uma iznevolschik oshiseka ungaya amaphoyisa.
Nayo futhi ngokuvamile eyenziwa ingcindezi. ukuhlazeka kwenqondo sibhekiswe iqiniso lokuthi zokuziphatha 'uchoboze "umuntu. Le course wonke amazwi kungase kubonise bebancane yayo, ukungeneli kanye lutho. Kodwa ngale ndlela-ke ekwazile ezithinta umuntu? Phela, wayehawukela, kunalokho, ngeke bamukele noma yimiphi isicelo noma ukuze 'ashaya ", uthukuthele ngesikhathi wezwa! Yebo, kungcono okunengqondo. Kodwa eqinisweni, kunesinye.
Ukuthuka yethulwe zingene isimo umuntu prostration ezithile. Wazizwa ngisho emzimbeni - emathempelini siqala ishaya ngamandla, umoya ophilisayo, futhi umsindo inhliziyo unika endaweni ethile endaweni emphinjeni. Umuntu ubamba yokucasukela exutshwe badideke, intukuthelo neminye, i-adrenalin okubangela nemizwa.
Lokhu kungenziwa kuqondwe. Ngemva fojisa umzamo sina womuntu inhlalakahle. Ngenxa ukuzethemba - enenani eliphakeme zokuziphatha. Ngisho e mbhoshongo ka Maslow kungenxa ezingeni lesine.
Ngakho, ngaleso sikhathi lapho umuntu wasibekela esimweni ongumlutha, umhlaseli efanayo, sokucasuka sigameko uyasijabulela ithuba elula emcindezela, "Wena okungenani-ke ongayenza?".
Lokhu ibinzana ngokoqobo okhipha trance yakhe. Yiqiniso, ukuba esimweni esejwayelekile, lowo muntu wayeyonikelwa kweso sichithiwe. Lokho nje kulesi simo, kwengqondo ukuzivikela indlela icushiwe. Ebuhlotsheni enganakile, umuntu evuka Isifiso uzibonakalise ukubaluleka kwabo ukukukhuthaza kumuntu osonile ukuthi wayenze iphutha ku-akhawunti yakhe. Yena ohlwitha kwabe sekusemahlombe akhe ukusiza. Kodwa-ke kwadingeka ukuba umuntu okonile.
Kusukela becindezelwa ngokwengqondo ngempela esephumelele ukufeza esebenzisa ukuhlazeka, kuzomele utshele indlela esebenza kahle ukuze ulwe umphumela.
Ngakho, udinga ukukhumbula ukuthi le ndlela isebenza kuphela labo bantu abakholelwa ngokwakho. Oludonsa umuntu ukuhleka kuphela ngesikhathi imizamo ka wodweshu, ukuhluleka ukwenza ukuthukwa linesisekelo. Bamane nje zadenut.
Ngakho kudingeka ube ngumuntu oludonsa. Noma yiliphi igama luhlaza isibe uhlobo isignali ukuthi ukhumbuza umuntu ukuthi sekuyisikhathi ukucupha izivikelo, futhi singavumi ukunqotshwa ukucunula.
Enhliziyweni yami, yebo, kungaba ukufutheka isiphepho. Kodwa ukuvela kufanele kwenzeke ukucisha umphehli wodweshu. I ekhululekile bheka esingenandaba, Yawning okungahleliwe, ukuma khulula, ukumamatheka lula - lolu hlobo nameknot kuye imizamo yakhe akuphumelelanga ukuphoqa umuntu ukuba enze okuthile indlela okubi okungako. Futhi lapho eqeda grovel, ungabeka umusho olula ngabandayo ezokwenza wambeka esimweni ekupheleni efile, "Wena wathi konke?". Nomake, "Ngizwe izwi lakho (a)." Futhi kungenzeka ukuthi ubeke umkhawulo ngokuphelele ngegama elilodwa: ". Okuhle" Ngokuphelele indiva lowo okonile akudingekile. Phela, uyazi ukuthi umuntu akuyona abayizithulu, futhi ngenxa yalokho, ukuze bamuzwe. Njalo uba buthule - ukuthi, cishe, umane akusho ukuthi sithini. Ngakho ukuthi okungenani indoda eyodwa ukuphendula kufanele kube.
Lena indlela obucayi xaxa ngawo becindezelwa ngokwengqondo. They possess akubona bonke. Phela, kufanele sikwazi ukuzivocavoca ithonya ukwazi abanye, ingqondo i bezibona uncritical ka isimo nezinkolelo.
Ngaphandle ezandleni ezifana izwi ngobuciko siqu. Ziyakwazi nozwela, oqaphelayo, futhi bazi kahle ukuthi ukusho kulokho noma lowo muntu, ukuthi ngaphansi kwethonya layo kabusha izikhungo zayo. Laba bantu bayazi ukuthi ukudlala equlekile "isisulu". Ahlanganisa ithoni, nobungane okwakubonakala kuwukuphikisana nokuvuleka, uzwela kanye nezinye izindlela eziningi-semi bayazi.
Isibonelo esimangalisayo angabhekwa elincomekayo zokukhwabanisa izikimu inthanethi - Ikhasi nanye amasayithi elimibalabala bayichaza ngokuthi eminye "ezintsha" Amaholo indlela, ekubeni atholakale umsebenzisi emva lingatshajwa kubo akhawunti yabo efanayo (lapha okuthiwa ezidingekayo ke) ku ezithile, "njengomkhuba nje esingumfanekiso ' inani. Scenic izinsiza ividiyo enjalo, zakhiwe ngokwemigomo isimiso esifanayo. Umuntu ukhuluma okokuqala ngokwengqondo indaba yakhe wahamba indlela esuka zidwedwe engcebweni bese sekuqalile ukuba umsebenzisi - iqala ethi lalikufanelekela impilo engcono, futhi kufanele ucabange ngaye, umndeni, izingane, abazali. Anakho ngalutho - engaba yizinkulungwane ezinhlanu, kube khona ukwenanana cishe ngemaminithi ekucala 10 ukusebenza ohlelweni.
Ngokumangalisayo, i-becindezelwa ngokwengqondo enjalo isebenza. Igama elithi "isikhulumi" wahlabeka esheshayo, engena umphefumulo, kwenza umuntu ukholwa, zishukumise. Kodwa-ke, izinzuzo kusukela kule kodwa kuphela.
Futhi lokhu kumane nje kuyisibonelo esisodwa. Ekuphileni, futhi, kuvamile impela. Futhi uma i-Internet ingase nje bophezela ukuvala ikhasi, empeleni has ukumelana nayo.
Ngokuvamile, becindezelwa ngokwengqondo nomuntu kungenca le ndlela. Izikhundla kuhilela ukusetshenziswa lamasu enobudlova, okukhohlisayo noma oluyimfihlo. Futhi uma esimweni ukuhlazeka noma ukuphoqwa umuntu uyabona ukuthi ukuhlasela kwakhe, kulesi simo - akukho.
Manipulator, ekuthuthukiseni izithakazelo zabo ngezithukuthuku zabanye abantu, uyakwazi ukufihla ubuso bakhe beqiniso, nokuziphatha ngobudlova futhi izinhloso ezimbi. Wayemazi kahle ngishiyeka ngokwengqondo "isisulu". Futhi okwamanje unonya futhi ungabi nandaba. I manipulator akuyona ngikhathazekile ngokuthi izenzo zakhe zingase umonakalo othile ebona njengendlela "pawn."
becindezelwa ngokwengqondo ku zokukhwabanisa lomuntu liwumsebenzi omuhle ngezindlela ezihlukahlukene. Udokotela wengqondo uHarriet Full, isibonelo, waphawula ukunakwa amakhulu amahlanu:
babancome - iplanethi ububele, ugazi, udumo, ukuxolisa, ukwamukelwa, ukunakwa, ukuthopha, futhi sycophancy.
Negative - nesithembiso ukususa esimweni esingajabulisi, kunzima futhi eziyinkinga.
ukuqinisa kwengxenye - ekukhuthazeni ukuphikelela womuntu, ekugcineni okuholela ukuhluleka kwawo. Isibonelo esimangalisayo - casino. Isidlali izimo zivuma uwine izikhathi eziningana, kodwa ekugcineni wehlela konke ukuze penny, abasuke bengene shí yokushisa.
Isijeziso - ukusabisa, ukusabisa ngokomzwelo, ukuhlukunyezwa, ngomzamo abeke umuzwa wecala.
Ukulimala - ukuqhuma alahlwayo, iconsi, inhlamba nezinye izibonelo bamesabise ukuziphatha sibhekiswe yokwesaba lohlaselwayo nokukholelwa ukungathi sína izinhloso zawo manipulator.
Kukhona okuningi ezinye izindlela. Kodwa, ngempela, babe yini, umgomo ngesikhathi manipulator kuhlale omunye - ukuze uzuze futhi sifinyelele lo mgomo.
Indlela yokugwema zokukhwabanisa?
Lo mbuzo, futhi, ukunikeza impendulo emfushane. Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ukusingatha lesi simo esicindezelayo ngokwengqondo ezilethwa izindlela zokukhwabanisa, kukhona eziningi izeluleko namathiphu. Futhi nye of them cha ndoda yamlalela, uyolokhu enze into efanayo - ukugcina isimo ngaphansi kolawulo.
Kudinga ukuzethemba, ukuzithiba, umuzwa enempilo Ukuqapha. Kubalulekile ukuqaphela ekuqaleni zokukhwabanisa. Kulula - umuntu ofisa ingcindezi ubuthakathaka bakhe.
Okuningi ngeke ukuvikele umkhuba ukuhlaziya okwenzekayo. Futhi akusiyo nje ukutadisha ukuziphatha ezandleni ezingaba khona. Umuntu, ngaphandle kofake ukuthi, udinga ukubheka imigomo yabo, amaphupho kanye izinhlelo. Kungakhathaliseki noma cha kungokwakhe? Noma izilungiselelo wayebizwa ayokubeka phezu kwayo, futhi manje kufanele? Lokhu kukonke kumele bacabange.
Kanjani ukuba simelane nokucindezelwa ngokwengqondo? Kuyadingeka ukuba ezibucayi. Futhi zibukeke engafinyeleleki. Ezandleni njalo ubale Imiphumela esheshayo. Awukwazi lona. Isizathu salokhu siwukuthi yonke sipho noma isicelo kufanele waphendula, "Ngicabanga." Futhi ngempela ukuba Ningacabangi ubuhlungu. Ngo isimo esizolile, ngaphandle ingcindezi ukunikeza "uzizwe out" isicelo kusuka ngaphakathi futhi uqonde ngempela umuntu udinga usizo, noma nje uzama athola izinzuzo.
Futhi uma isinqumo lokwenqaba, kubalulekile ukwenza kube kwifomu okuqinile, okubonisa uhlamvu. Ukuzwa engaqinisekile "O, qhabo, mhlawumbe ..." le manipulator iqala "dolamyvali" umuntu. Awukwazi ukuba kwenzeke lokho.
By the way, ungabi namahloni ukukhombisa "puppeteer" imizwelo yabo. Kwakubonakalisiwe kuye, futhi ngeke yokusilela. Ungenza umusho elula efana: "Ngiyakukubonisa azikhokhe lutho, futhi ngenxa yokuphikelela yakho, ngizizwa ngabongi!".
Kubalulekile ukwazi ukuthi ngisho Criminal Code kukhona ulwazi mayelana becindezelwa ngokwengqondo nomuntu. Of Criminal Code ngeke engadingekile ukuvula bese upheqela ku inani sihloko 40. Ibizwa ngokuthi "ukuphoqwa ngokomzimba noma ngokwengqondo." Futhi - zithinta ngqo yokuthi kuthiweni ekuqaleni. lapha kuphela, bese eyingozi.
Sikhuluma ubugebengu obenziwa ngabantu ngaphansi ukucindezela wodweshu. Isigaba sokuqala sihloko sithi umonakalo izithakazelo ezivikelwe ngumthetho, ke akubhekwa icala. Kodwa kuphela uma umuntu engenamandla okwamanje ukulawula izenzo zakhe. Ake sithi waphoqwa ngesibhamu, noma ukubamba emehlweni umuntu nasezihlotsheni.
Kodwa uma kwaba becindezelwa ngokwengqondo umuntu? Inombolo yesihloko 40 kule umlandu udluliselwa sangaphambilini, ngesikhathi Cha 39. Indaba umthwalo lobugebengu ikhomishana ieala ngaphansi kwengcindezi engqondo, yanquma umbono bezimiso zawo.
Inombolo yesihloko 39 ubizwa ngokuthi "isidingo kakhulu". Lithi ubugebengu akuyona, uma lenzeka ngenxa ekuqedeni ingozi esongela umuntu noma abanye abantu ngqo.
Nokho, lokhu akukhona konke okushiwo Criminal Code. becindezelwa ngokwengqondo ngisho okukhulunywe ngaye esihlokweni 130th. Kukhona kuqashelwe ukuthi ukuhlazeka udumo omunye umuntu nesithunzi obonakaliswe ifomu kakhulu, kuyinto esithola esihle kuze ruble 40 000, noma ngeholo izinyanga ezintathu. Ezimweni ezimbi kakhulu eyabelwe amahora 120 yokufeza inkonzo yomphakathi noma izimilo izinyanga 6. Umkhawulo isigwebo - umkhawulo wenkululeko unyaka kuya ku-1. kwaba nemiphumela emibi kakhulu becindezelwa ngokwengqondo.
Article we Criminal Code siphinde sihlinzeke ngokuthi ukuthuka obonakaliswe zomphakathi (ngokusebenzisa abezindaba, enkulumweni kuvidiyo, nokunye. D.), Shall bajeziswe isigwebo kabili okukhulu. Umkhawulo isigwebo - iminyaka 2 yokuvinjelwa wenkululeko.
becindezelwa ngokwengqondo phezu ingane - kuba indaba engathí sina. Wonke umuntu uyazi ukuthi izingane (kakhulu, noma kunjalo) ibuthakathaka hhayi ukwazi eqinile. Sebenza kuzo kalula kakhulu. Futhi lapha asikhulumi mayelana ingcindezi enempilo ukuthi ngisho nalabo lakhe lingeke ladalulwa ( "Musa uberosh amathoyizi - mina ngeke ukukhuluma nawe" - umthelela ngokusebenzisa wecala). Lokhu kusho ukusebenzisa iZwi kokucindezelwa bangempela kakhulu yini, ingane kuhlasela (ngokwengqondo).
Ingcindezi Criminal Code kulokhu eyichaza ngokuthi "yemfanelo Non-ekukhuliseni izingane." Lesi sihloko №156. Ngaphezu kwalokho, amalungiselelo akusebenzi kubantu kuphela abazali kodwa futhi udondolo yokuphatha izikhungo zemfundo, kwezenhlalo, ezemfundo kanye wezokwelapha. Ukuphathwa kabi - yilokho elilingana lokho becindezelwa ngokwengqondo. Article sinquma isijeziso. Lokhu kungaba esihle ruble 100,000, umsebenzi oyimpoqo (amahora 440), nokuqedwa ilungelo anesikhundla ezithile, noma aboshwe iminyaka emithathu.
Kodwa-ke, ukuba amacala umbango kuyaqabukela ifika. Kwenqondo ingcindezi sihloko we Criminal Code ephawula ngendlela ethile, empilweni njengoba kwenzeka kwezinye ukubonakaliswa.
Abazali abaningi abakuvumeli unceremoniously kwaphazamiseka esikhaleni wengane, ngesihluku elawulwa bakhe konke okwenzayo, ukuba ngikwenze lokho akathandi (hamba esigabeni isibhakela, uma ingane ifuna ukudansa, isibonelo). Abanye bakholelwa - uma ukhombise ukushiyeka kwakhe Wabakhuza. Kodwa lokhu akulona icala. Akubona bonke abantu abadala ukuba ithole psyche namandla kanye engqondweni, it is isebenze. Ingane futhi wakwenza uvala ngokwako waqala ukungabaza amakhono abo siqu kanye namakhono, futhi njalo wazizwa enecala Akucaci lokho. Ngakho, abazali ezikhandla ithonya ezicindezelayo ezembula imizwa yabo kanye nokwesaba. Kodwa ekugcineni baba izitha yengane yabo kunokuba babhekane njengabangane. Ngakho-ke, izindaba imfundo kumele wasondela njengento ebaluleke kakhulu. Ukuzalwa kanye kumiswa siqu ilungu elisha umphakathi - kuwumthwalo omkhulu futhi umsebenzi sina.
Ekugcineni ngingathanda ukukhuluma kancane mayelana becindezelwa ngokwengqondo emsebenzini. Phela, iningi kulo umsebenzi umuntu ebhekene lesi simanga.
Udinga ukuqonda wokuqala nomkhulu kunabo bonke ukuthi inhlangano eziqasha abasebenzi, abantu - kungcono nje isakhiwo. Ngo ngayinye sinendawo yaso futhi wenza imisebenzi ethile. Futhi ubudlelwano phakathi nozakwethu kufanele kufanelane, ibhizinisi. Uma othile ngokuzumayo zama acindezele umuntu ukuba prisluzhil (ukufaka endaweni, benza umsebenzi ezingcolile, kuya kwesobunxele e- okukhiphayo), ukuthi ashiye isikhundla sakhe ngenhlonipho - umkhuhlane ezimbalwa, kodwa ngangokunokwenzeka benomusa. Awukwazi ukubeka izithakazelo zabanye kuqala abantu babo. Ikakhulukazi uma benamakhono isibindi sokuya nezimfuneko ezinjalo.
Okukhishwayo kuphela yilabo ezimweni lapho uzakwabo kudingeka ngempela usizo. By the way, esabe inhlebo ngisho nencane, amahemuhemu, inhlebo noma imizamo "unseat" akudingekile. Umuntu akumelwe akhumbule ukuthi - uchwepheshe kwasekuqaleni. Amakhono akhe kanye nokusebenza kwezilimi okubi sezizimbi kakhulu. Futhi boss, uma kufanele sibe nesithakazelo indaba ephathwayo, ungahlala ukuchaza.
Okuningi okubi kunalokho, uma "ukucindezeleka" kusukela kumqashi eza ngqo. Futhi bakhona nalabo abaholi injabulo kuphela asicindezele kubahlinzeki abantu. Article we Criminal Code ke Yiqiniso, ngeke kusize ulwazi, kodwa amalungiselelo Code Labour - ngokuphelele.
Ngokuvamile, izisebenzi elula nazo "izicelo" eziphikelelayo abakhulu isicelo komsebenzi ngokuzithandela. Lokhu kuphambene isihloko lama-77 RF LC, kusukela izenzo ezinjalo kuvimbe nenkululeko yokukhuluma umsebenzi. Futhi indoda unelungelo ukubuza umshushisi ukuvula ingxabano yomsebenzi, noma ngqo enkantolo. Kodwa lokho kuzodinga ubufakazi etholwe ngaphandle lokwephula umthetho. Bayadingeka, ngasendleleni, noma kunjalo, noma isikhalazo.
Kafushane nje, ngingathanda ukuthi isihloko becindezelwa ngokwengqondo kunemininingwane eminingi futhi ezithakazelisayo ngempela. Uqukethe amaphuzu nuanced kakhudlwana kuwe futhi abaluleke. Kodwa kubo, khona isifiso, itholakala njalo ngabanye. Ulwazi walolu hlobo never engadingekile.